Monday November 16, 2020 - 13:48:32 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Munaasabadda waxaa ku sugnaa saraakiil ka socday dowladda Ingiriiska kuwaas oo ubaxyo dhigayay wax loo ekaysiiyay qabriyada ciidamadii gaalada ahaa ee Ingiriiska ka dhintay.
Mas'uuliyiin katirsan maamulka isku magacaabay Somaliland ayaa gudaha ugalay kaniisadda iyagoona ka qeybgalay xusuusta loo sameynayay askarta halaagsantay.
Sawirro lagasoo qaabtay Kaniisadda gudaheeda waxaa kasoo muuqanayay Faysal Cali Waraabe iyo mas'uuliyiin kale oo kaniisadda ku sugan islamarkaana ubaxyo dhigaya qabriyada askarta gaalada Ingiriiska.
Madaxda maamul 'Somaliland' oo calmaaniyiin ubadan ayaa kaalin weyn ku leh faafinta diin la'aanta waxayna dhowr jeer soo saareen xeerar ogolaanaya in kaniisado iyo macaabid gaaladu leedahay laga furi karo Hargeysa iyo magaalooyinka kale.
Maamulka 'Somaliland' oo xiray Xildhibaan Mustafa Dhuxuloow.